DutchtownSTL ဆိုင်အကြောင်း• DutchtownSTL ဆိုင်
ပင်မစာမျက်နှာ / DutchtownSTL ဆိုင်အကြောင်း
DutchtownSTL ဆိုင်သည် Dutchtown areaရိယာကိုမြှင့်တင်ရန်နှင့်ရန်ပုံငွေရှာဖွေရန်ဆောင်ရွက်သည် DT2 • Downtown Dutchtown.
ကျွန်ုပ်တို့သည်အရည်အသွေးမြင့်ကုန်ပစ္စည်းများကိုပေးနေစဉ်တွင် Dutchtown အိမ်နီးချင်းများနှင့်ပရိသတ်များအားကျွန်ုပ်တို့၏အဝတ်အစားနှင့်လက်ဆောင်များဝယ်ယူရန်အားပေးရန်ကုန်ကျစရိတ်များကိုတတ်နိုင်သမျှနိမ့်ကျအောင်ထိန်းသိမ်းရန်ကြိုးစားသည်။ ထုတ်ကုန်များထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ခြင်းစရိတ်ထက်ကျော်လွန်သော DutchtownSTL ဆိုင်တွင်ထုတ်ကုန်များအတွက်ရရှိသောမည်သည့်ငွေပေးချေမှုကိုမဆို DT2 သို့တိုက်ရိုက်သွားလိမ့်မည်။
DutchtownSTL ဆိုင်မှအ ၀ တ်အထည်နှင့်အခြားလက်ဆောင်ပစ္စည်းအချို့ကိုတတိယပါတီထုတ်လုပ်သူမှလိုအပ်ချက်အရထုတ်လုပ်သည်။ ထုတ်ကုန်များကိုပုံနှိပ်ခြင်း၊ ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုသို့တင်ပို့ခြင်းတို့ဖြစ်သည်။ ဖြည့်ဆည်းခြင်းနှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးကာလကွဲပြားနိုင်ပါသည်။
အကြောင်းမှာကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်အများစုကိုဝယ်လိုအားဖြင့်ပြုလုပ်သောကြောင့်ပစ္စည်းချွတ်ယွင်းမှုမရှိလျှင်ပြန်ပို့ခြင်းနှင့်လဲလှယ်ခြင်းများကိုကန့်သတ်ထားသည်။ သင်၏ဝယ်ယူမှုအရည်အသွေးနှင့်ပတ်သက်သောပြanနာရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ဖော်ပြချက်အားလုံးကိုပြန်လည်သုံးသပ်ရန်နှင့်သင့်ဝယ်ယူမှုသည်သင့်အတွက်မှန်ကန်မှုရှိစေရန်ပူးတွဲပါသောအရွယ်အစားလမ်းညွှန်များကိုသေချာကြည့်ပါ။ အကယ်၍ ကုန်ပစ္စည်းနှင့် ပတ်သက်၍ နောက်ထပ်မေးခွန်းများရှိပါက၊ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ.
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖတ်ရှုပါ ကိုယ်ရေးအချက်အလက်မူဝါဒ နှင့် သတ်မှတ်ချက်များနှင့်အခွအေန.